नेपाल आज | मेरो छवि ‘ड्यामेज’ गर्ने प्रयास भयो (भिडियोसहित)
मेरो छवि ‘ड्यामेज’ गर्ने प्रयास भयो (भिडियोसहित)
शुक्रबार, १३ असार २०७६ गते प्रकाशित - नेपाल आज
गीतसंगीत क्षेत्रमा कपिराइटको विषयले बेला बेला बजार तात्ने गर्छ । कलाकार, सर्जकहरुका पनि आआफ्नै गुनासा छन् । पछिल्लो समय त सरकार पनि कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदा संगीतकर्मीहरुले सिर्जना नै सार्वजनिक गर्न नमिल्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । यस्तो बेला नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल सांस्कृतिक संघ के गरिरहेको छ त ? यस्तै विषयमा संघका सभापति तिर्थ थापासँग हामीले असार १० गते मंगलबार कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ, सोही कुराकानीको मुख्यमुख्य अंशः
पशुपति शर्माको गीत नै प्रतिबन्ध लाग्यो, ‘गलबन्दी च्यातियो’ बोलको गीतमा सर्जकहरुबीच विवाद उत्पन्न भयो । अस्ता अनेकन विवादहरु छन् । कलाकार, सर्जकहरुको संस्था भनेर चिनिने नेपाल सांस्कृतिक संघलाई यी विषय मतलव नै छैन किन ?
सांस्कृतिककर्मीहरुको विषयमा कुनै पनि पार्टीसँग लिखित धारणा छैन । राज्यसँग पनि छैन । यसकारण हामी राजनीतिक पार्र्टीनिकट छौं । पार्टीमा, संसदमा सांस्कृतिककर्मीहरुले स्थान पाएका छैनन् । ७७ नै जिल्लामा शाखा गठन गरेका छौं । ६३ सालमा स्थापना भएको यो संघले दुई पटक त अधिवेशन नै गरिसकेको छ ।
तपाईंहरुले आन्तरिक संगठनको काम त गर्नुभयो । तर राष्ट्रिय मामिलमा खै बोल्नु भएको ?
हैन, हामीले बोलेका छौं । पशुपति शर्माको गीत प्रतिबन्धमा लाग्दा हामीले विज्ञप्ति निकालेर सर्जकको पक्षमा आफूलाई उभ्यायौं । कार्यक्रम राखेर पनि बोलेका छौं । गुठी विधेयकका विषयमा पनि कुरा बाहिर ल्याएका छौं । अलि बाहिर प्रचार कम भयो होला, तर गरेका छौं ।
नेपाल सांस्कृतिक संघ भनेको कांग्रेसी नेताहरुको गोजीको संस्था भयो भन्नेहरु पनि छन् नी ?
हो त्यस्तो पनि भन्नेहरु छन् । हामीलाई अरुले पनि तिमीहरु कहाँ छौं ? भनेर सोध्नेहरु पनि छन् । काठमाडौंमा लेखक, कवि, साहित्यकारहरुको भेला गरेका छौं । सांस्कृतिकर्मीहरुको हक हितका लागि काम गर्न ७७ नै जिल्लाका सभापतिहरुको भेला गरेका थियौं हेटौडामा । सातै प्रदेशमा पनि संगठन निर्माण गर्दै छौं ।
जहाँसम्म कलाकारहरुबीचको विवाद, प्रतिलिपि अधिकारको मामिला आउँछ भने हाम्रो संघको विभिन्न शाखाहरुले त्यस्ता कुराहरुलाई हेर्छ । संघमा गायन, नृत्य, साहित्य हेर्ने विभिन्न १० शाखा छन् । ती मध्ये गायन हेर्ने शाखाका प्रमुख बुद्धिराम खड्कालाई गलबन्दी गीतका सम्बन्धमा उत्पन्न विवाद समाधानका लागि पहल गर्न भनिसकेको छु ।
तपाईंहरु कांग्रेस कांग्रेस भन्दै दौडिनु हुन्छ । तर कांग्रेस सत्तामा हुँदा राप्रपाका मान्छेलाई अवसर दिन्छ । के अर्थ भयो र ?
हो यस्तो त छ । कसैले गल्ती गर्यो भन्दैमा हामीले पार्टीविपरीत धारणा राख्नु हुँदैन । चलचित्र विकास बोर्डमा राप्रपा नेताकी छोरीलाई अध्यक्ष बनाइयो । विभिन्न एकाडेमीमा पनि बाहिरका मान्छेले अवसर पाउँछन् । यस्तो अवस्था त छ ।
तपाईंले स्थापनाको छोटो समयमा दुई पटक महाधिवेशन भयो भन्नु भयो । तर सांस्कृतिक संघका पदाधिकारीलाई त नेताले टीका लगाइ दिएर पद दिन्छन् भन्ने चर्चा छ नी ?
हामीले कर्म गर्ने हो । हाम्रा साथीहरुले लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाटै नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नु हुन्छ । तर सहमति पनि लोकतान्त्रिक पद्धति नै हो । सहमतिकै आधारमा अहिले पाँच जनाको कमिटी गठन भएको छ ।
नोमिनेसन भएर एक जनामात्रै पनि प्रतिस्पर्धामा उत्रियो भने त्यहाँ चुनाव नै हुनुपर्छ । तपाईंहरुकोमा त उम्मेदवार ज्यूँका त्यूँ छन्, नेताहरुले टीका लगाइदिनु भयो नी त ?
मैले बु्झेसम्म पार्टीगत कुरा के हुँदो रहेछ भने, एकता छ भन्ने सन्देश दिन पनि यसखाले अभ्यास हुँदो रहेछ । यो फेरि पार्टीको जीवनसँग जोडिएको संस्था भएकोले कतिपय कानुनी कुराहरु नमिल्न सक्छन् । सबै साथीहरु संगठनकै छन् । अलिकति विवाद हुन सक्छ । हामी टीका नै लगाएर आए पनि हामीले राम्रो गरिरहेका छौं । सबै पक्षलाई समातेर अगाडि बढ्नु पर्छ ।
वर्तमान सरकार कलाकार, सर्जकप्रति कत्तिको उदार छ ?
कलाकार, सर्जक सन्देश बाहक हुन् । नेपाल सरकारले अहिले सांस्कृतिक क्षेत्रमा प्रहार गरेको छ । हामीले बारम्बार यस्ता कुरामा आवाज उठाएका छौं । प्रधानमन्त्रीलाई नै ज्ञापनपत्र बुझाएका छौं ।
कलाकार दलको, पत्रकार दलको, शिक्षक दलको हुने यस्तो परिपाटी राम्रो हो ?
आस्था अभिव्यक्त गर्न पाइन्छ । आस्थाअनुसारको संगठनमा संगठित हुन पाउनु पर्छ । नेपालमा सांस्कृतिक क्षेत्रका मानिसहरुले राजनीतिमा प्रवेश पाएका छैनन् । विभिन्न जातजातिका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरेका छ । तर सांस्कृतिक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व कहिले पनि भएन । कांग्रेस पार्टी भित्र पनि सांस्कृतिक संघको प्रतिनिधित्व छैन । हाम्रो माग पनि हो ।
तपाईंले आफ्नै सघकै सदस्यबाट पैसा लिएको, नतिरेको भन्ने विषय आएको छ । यो मामिला प्रहरीमा पनि पुगेको भन्ने छ । कुरा के हो ?
सांस्कृतिक संघ स्थापना भएदेखि विभिन्न समस्या आए । हामीले समाधान गरेका छौं । संस्थाकै लागि पैसा लिएको हो । व्यक्तिगत रुपमा लिएको होइन । खासमा दुई लाख लिएको हो । मैले ४ लाख ७५ हजार तिरिसकेको छु । संस्थाको बदनाम गराउन गरिएको नियोजित षडयन्त्र हो । किताब निकाल्न ४ लाख लिइएको भन्ने कुरा सत्य होइन । संघ चलाउन हामी सबैले खर्च गरेका छौं । जसले पैसा दिनु भयो, उहाँ सहमहामन्त्री भइसक्नु भएको मान्छे हो । कारोबार अहिले केही पनि छैन । उहाँलाई गलत सल्लाह दिने मान्छे पनि होलान् ।